Myat Shu - 2011 September 24
You are here : Myat Shu » Archives for September 24th, 2011
ပန်းချီကား ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်
Published By Myat Shu On Saturday, September 24th 2011. Under သတင်းတိုများ
ပန်းချီဆရာ ၆၀ နီးပါးဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ပန်းချီကား ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ပန်းချီဆရာငါးဦးက စုပေါင်းအကောင်အထည် ဖော်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ နိုင်ငံတကာတွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ပန်းချီကား ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းအသွင်ကို ရယူထားသော်လည်း ယခု မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဆောင်ရွက်သည့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှာမူ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အသွင်တစ်ရပ်ထက် ပန်းချီလောကအတွင်း လိုအပ်ချက်က်ို ၀င်ဖြည့်သည့် အနေအထား တစ်ခုသာ ဖြစ်သည်ဟု အဆိုပါ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်လျက်ရှိသူ ပန်းချီဆရာ ဦးလှထွန်းက ပြောသည်။ “အဓိကတော့ ပန်းချီဆရာနဲ့ ၀ယ်လက်တို့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးတဲ့ သဘောပါ။ အဲဒီလို တွေ့ပေးတဲ့အတွက် ပန်းချီအကြောင်း နားမလည်တဲ့သူတွေ အနေနဲ့လည်း အရည်အသွေး ညံ့တဲ့ ပစ္စည်းမျိုး ... Continue Reading
မီးရထားလမ်း မိုင်သုံးထောင်ကျော်ကို ကန်ထရိုက်စနစ်ဖြင့် ပြင်ဆင်မည်
ရန်ကုန်-မန္တလေးနှင့် မန္တလေး- မြစ်ကြီးနား ရထားလမ်းပိုင်း အပါအ၀င် ရထားသံလမ်း အရှည်မိုင် ၃၀၀၀ ကျော်ကို ကန်ထရိုက်စနစ်ဖြင့် ပြန်လည် ပြင်ဆင်သွားရန် စီစဉ်လျက် ရှိသောကြောင့် ကန်ထရိုက်များအား ဖိတ်ခေါ်လျက်ရှိကြောင်း မြန်မာ့မီးရထား လုပ်ငန်းမှ သိရသည်။ “မိုင် ၃၀၀၀ ကျော်ကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသွားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကန်ထရိုက်ဦးရေကို သတ်မှတ်ထားတာ မရှိဘူး။ ကန်ထရိုက် အများကြီး လိုအပ်မှာပါ” ဟု မြန်မာ့မီးရထားလုပ်ငန်း အထွေထွေမန်နေဂျာ (မြို့ပြ) ဦးသီဟန်က ပြောသည်။ သံလမ်းပြုပြင်ရန် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များကို လျှောက်လွှာခေါ် ယူထားပြီး လက်ရှိတွင် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် စိတ်ဝင်စားမှု ရှိနေပြီး လျှောက်လွှာ တင်ထားကြကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာ့မီးရထားမှ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနှင့် ... Continue Reading
နေပြည်တော် အိမ်ခြံမြေ ဈေးကွက်တွင် ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လျက်ရှိ
နေပြည်တော် ခရိုင်အတွင်း အကြီးစား စက်မှုအလုပ်ရုံ အကောင်အထည်ဖော် တည်ဆောက်နေခြင်းကြောင့် ယင်းအလုပ်ရုံ စီမံကိန်း တည်ဆောက်သည့် နီးစပ်သော နေရာများတွင် အိမ်ခြံမြေ ၀ယ်ယူစုဆောင်းသူများနှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် ၀ယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များပြားလာသောကြောင့် နေပြည်တော် အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်တွင် ဈေးနှုန်းတက်များ မြင့်တက်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။ “ဒီနားမှာက စက်မှုဇုန် ဆောက်မှာဆိုတော့ လုပ်ငန်းရှင်တွေက ဒီဇုန်နဲ့ နီးစပ်တဲ့ နေရာလေးမှာ မြေကွက်ကို သူ့ထက်ငါ ဈေးပိုပေးပြီး ၀ယ်လာကြတယ်လေ။ အဲဒါကြောင့် ဒီနားက မြေကွက်လေးတွေ ဈေးနည်းနည်း တက်လာတယ်” ဟု ဘောဂ၀တီ တိုးချဲ့ရပ်နေ ဦးတင်ရွှေက ပြောသည်။ တည်ဆောက်နေသည့် အကြီးစား မော်တော်ယာဉ် တပ်ဆင်ပြုပြင်ရေး အလုပ်ရုံစီမံကိန်းကို နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားရှိ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Saturday, September 24th 2011. Under ကာတွန်း